Xaabsade & Ragg uu kamid yahay oo laga saaray Liiska Baarlamaanka Cusub - Xogta Keydmedia Online | KEYDMEDIA ONLINE
Xaabsade & Ragg uu kamid yahay oo laga saaray Liiska Baarlamaanka Cusub - Xogta Keydmedia Online
Muqdisho (KON) - Wali waxaa socda kala xulista cida noqoneysa Xildhibaan wanagsan oo kamid noqda Baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda.
Guddiga farsamada ee soo xulista Baarlamaanka ayaa ku wareersan sidii ay u kala saari lahaayeen liiska loo soo gudbiyey taasina waxaa kasii daran iyaga oo aan haysan wakhti badan oo ay wax ku kala saaraan.
Gudiga ayaa loo gudbiyay 203 xubnood oo ay odayaasha soo xuleen, waxaana gudigu uu dib u soo celiyay intii badneyd liiskii loo gudbiyay.
Sida ay wax u kala saaraayaan guddiga farsamada waa saddex qaab oo ay kamid tahay in qofka kamid noqonaaya Baarlamaanka cusub uusan horay usoo gelin denbiyo dagaal.
Manata gudiga farsmada waxaa ay liiska ka saareen oo ay soo celiyeen magacyada kala ah C/raxaan Ibbi oo lagu edeeyay musuq maasuqa uu dhowaan usoo jeediyey bangiga adduunka iyo arrintii iibinta qayb kamid ah badda Soomaaliya ee sanadkii 2009-kii, markii uu ahaa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda.
Maxamed Ibraahim Xaabsade oo kamid ahaa ururkii RRA ee Bay iyo Bakool iyo Maxamed Qanyare Afrax oo isagana kamid ahaa qab qablayaahsii dagaalka Muqdisho ayaa kamid ah xubnaha maanta dib loo soo celiyay magacyadooda.